आफूलाई कसैले मन पराएको कसरी थाहा पाउने ? यी कुराहरुमा विचार गर्नुस् : – Sadhaiko Khabar
आफूलाई कसैले मन पराएको कसरी थाहा पाउने ? यी कुराहरुमा विचार गर्नुस् :
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख २६, २०७८ समय: ९:५४:४२
प्रेम दुःखदायी पनि हुन सक्छ । किनकी, प्रेम प्राप्त गर्नको लागि केही गुमाउनु पनि पर्छ । बदलामा केहि नपाइकन केहि गुमाउनुमा केहि कष्ट हुँदैन् भने यसको मतलव तपाईको ऊप्रति सच्चा प्रेम हो । निश्चल, निष्कपट त्या’गको विना तपाई प्रेमलाई बुझन सक्नुुहुन्न ।
प्रेम अनमोल हुन्छ । तर, निःशुल्क पाइन्छ । तपाईले तय गर्न सक्नुहुन्न, प्रेम कहिले, कहाँ र कति बेला हुन्छ । प्रेम न त बेच्न सकिन्छ न किन्न । कसैले पनि कसैलाई प्रेम गर्न बाध्य पार्न सकिदैन । प्रेम एक सर्वशक्ति’शाली अनुभुति हो । आफ्नो भावनाको प्रकट गर्नको लागि यसको उपयोग या दुरुप’योग पनि गर्न सक्छन् ।
१. कुनै पनि केटीले तपाइँलाई मन पराउँछे भने उसले तपाइसँग बोल्दा आफ्नो कपाल टो’क्ने गर्छे । आफ्नो कपाल चलाउँदै कुनै युवती तपाइँसँग बोल्छे वा बोल्दा कपाल चलाइरहन्छे भने बुझ्नुस् उसले तपाइँलाई मन पराउँछे र तपाइँको ध्यान खिच्न चाहन्छे ।
२. यदि कुनै केटीले तपाइँसँग घुमफिर गर्न वा समय विताउन तयार हुन्छे भने बुझ्नुस् उसले तपाइँलाई मन पराउँछे । यो साथीको रुपमा होस् वा प्रेमकै रुपमा ।
४. केटीहरु त्यस्ता केटासँग कुरा गरेर समय ब’र्वाद गर्दैनन् जो उनीहरुलाई मन पर्दैनन् । तपाइँसँग कुरा गर्न इच्छुक केटीले तपाइँलाई म पराइरहेकी पनि हुन्छे ।
५. कति कति बेला केटीहरु अली चर्को स्वरमा केटासँग कुरा गर्छन् । यसो गर्नु सँधै रि’साएको मात्र होइन कहिलेकाँहि खुसी नै रहेको तर प्रेम बुझाउनका लागि पनि गर्छन् । तपाइँको कुरा मन पराउने केटीले मात्र तपाइँसँग च’र्को स्वरमा कुरा गर्छन् ।
६. तपाइँलाई मन पराउने युवती तपाइँसँग हुँदा हाँसी खुसी देखिन्छन् । उनीहरुले तपाइँसँग रहेको समय हाँसी खुसीमै वि’तेको देखाउन पनि चाहन्छन् । तर बाटोमा कुनै केटीले हाँस्दैमा भने यसको अर्थ त्यस्तो लाग्दैन ।
७. तपाइँसँग भेट्न आउँदा चिटिक्क परेर वा बनेर आउने केटी पनि तपाइँलाई प्रभाव छो’ड्न चाहेको बुझ्नुस् । अरुबेला वास्ता नगर्ने तर तपाइँलाई भेट्न आउँदा भने सम्हालिने केटीले तपाइँलाई मन पराउँछिन् ।